PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - Bafuna ukufaka umkhiqizo ezimakethe zangaphandle
Bafuna ukufaka umkhiqizo ezimakethe zangaphandle
Bathi uma isivuno sisiningi kakhulu, izimakethe zifuna ukusithenga ngemali encane
Ilanga - 2018-11-29 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE
UKUBEKEZELA kuzale impumelelo kwabesifazane baseMbali, eMgungundlovu, abasebenzisa indlela engajwayelekile ukutshala utamatisi ngaphandle kokusebenzisa inhlabathi ( hydroponic farming).
Laba besifazane abawu-6, abangabanikazi beXhiba Co-operative, bathi baqome ukusebenzisa i- hydroponic ngoba kayiwasebenzisi kakhulu amanzi. Uma utshala ngalolu hlelo, kawutshali phezu kwenhlabathi, kodwa ufaka upulastiki ngaphansi bese ufaka umquba isitshalo sikhule phezu kwawo.
Abalimi abamhlophe bayaluthanda kakhulu lolu hlelo njengoba beluncoba ngokonga amanzi kwazise uwafaka asheshe afike esitshalweni futhi ahlale isikhathi eside njengoba kusuke kukhona upulastiki ngaphansi.
AbeXhiba basanda kuthola inkontileka yokuthumela umkhiqizo wabo katamatisi, i-spinashi no- green pepper eMkhondeni Fresh Produce Market, khona eMgungundlovu.
Ekhuluma neLANGA uNkk Hlaleleni Buthelezi (60), ongusihlalo walo mfelandawonye, uthi beqale ngo-2005 ukuhlangana ngenhloso yokuba babeke isinkwa etafuleni emindenini yabo.
“Siqale satshala eFundokuhle Secondary School, indodakazi yami yangicebisa ngokuba senze lolu hlelo lokutshala ngaphandle kwenhlabathi. Siqale satshala emhhumeni ( tunnel) owodwa ngosizo esiluthole kwi-Ithala Business Development Co-operation, elisiboleke u-R64 000 esithenge ngawo umhhume wokuqala.
"Sidonse ugesi namanzi saqala sasebenza. Kusukela lapho kasizange sisabheka emuva njengoba siqhubekile sathola eminye imihhume ngosizo lwabakwaEskom, abasixhase ngamathathu, okusize kakhulu ukwandisa isivuno sethu sikatamatisi.
"Kumanje utamatisi esiwukhiqizayo uma senze kahle, kuba ngamabhokisi awu-700 o-5kg,” kusho uNkz Buthelezi.
Uthi okuhle ngotamatisi wukuthi uyashesha ukuvuthwa njengoba uthatha izinyanga ezintathu.
Uthi ngokuhamba kwesikhathi, bangenele umncintiswano weMbokodo Iyazenzela, ohlelwa yi-Ithala, kwaba khona abakuwinayo khona.
“Ukuwina kwethu iMbokodo Iyazenzela, kusisize kakhulu njengoba i-Ithala lisithumelele abeluleki abasicebisa ngamasu amasha, angasisiza ekubeni isivuno sethu sande.
"Baphinde basisiza ukwenza i- business plan esicele ngayo uxhaso kwi-Agricultural Business Development Agency, basinika nosizo lokugcina imininingwane yethu yebhizinisi ngendlela efanele,” kusho uNkk Buthelezi.
Laba besifazane sebedale amathuba emisebenzi kwabanye besifazane abawu-20 ababaqashile kuleli bhizinisi labo.
UNkk Buthelezi uthi njengamanye amabhizinisi, nabo bake babhekana nezinqinamba ezinzi- ma, kodwa basizwa wukusebenza ngokubambisana.
“Kube nzima kakhulu ngesikhathi kufike isiphepho esasinamandla, uDineo. Kuphephuke imihhume esitshala kuyona, kwalimala kwaphela ukudla, kwafana nokuthi sisebenzele ubala.
"Kulo msebenzi wokukhiqiza ukudla okufana notamatisi, kudingeka ukuba ubekezele ngoba uma isivuno sibesiningi kakhulu, izimakethe zisithenga ngemali ephansi nawe ugcine sewusidayisa ngayo ngoba wesaba ukuthi utamatisi ungaze ubole,” kusho yena.
Uthi abakudingayo wukuthola usizo lokuthi bangangena kanjani ezimakethe zangaphandle njengoba bebona ukuthi bangenza enhle kakhulu imali kuzona. [email protected]
Ithala lisisize ngabeluleki abasicebisa ngezindlela zokwandisa isivuno.
UNKK Hlaleleni Buthelezi ongusihlalo weXhiba Co-operative, uncoma uhlelo lwe- ngokuthi longa amanzi, lwenze umkhiqizo wabo ungancintisani neminye emakethe ngendlela oba muhle ngayo njengoba ubonakala.